Wiil 12 sano jir ah oo helay khalfoofka xayawaan noolaa 69 milyan oo sano ka hor | Caroog News
Wiil 12 sano jir ah oo helay khalfoofka xayawaan noolaa 69 milyan oo sano ka hor
caroog.net Wiil 12 sano jir ah ayaa sameeyay arrin taariikhi ah kaddib markii uu soo helay wax uu ku haminayay inta uu noolyahay.
Wuxuu helay khalfoofka xayawaan dhif iyo naadir ah oo ku bah ah noolaha loo garanayay – dinosaur – kaas oo lagu qiyaasay inuu jiro 69 milyan oo sannadood.
Wiilka yar ayaa bishii July arkay lafo sallax dul saaran, wuxuu xilligaa aabihii kula lugaynayay deegaan qani ku ah haraadiga xayawaanka, halkaas oo ku taal gobolka Alberta ee waddanka Canada.
Khamiistii, ayey hay’adda baarta waxyaabahaas ay soo gebagabaysay baaritaankeedii.
Wiilka oo lagu magacaabo Nathan Hrushkin, ayaa sheegay in markii ugu horraysay ee uu lafahaasi indhaha saaray “uu hadalkiiba ka soo bixi waayay”.
“Ma aanan ku farxin xitaa, walow aan ogaa in ay aheyd in aan farxo,” ayuu BBCda u sheegay.
“Walwal badan ayaan dareemayay oo ku aaddan in aan helay khalfoofka xayawaan oo dhif iyo naadirka ah dunida ee ka tirsan dinosaurs-ka.”
Nathan ayaa tan iyo markii uu lix sano jirka ahaa, aad u danayn jiray xayawaankan, oo badanaa aabihii ayuu u raaci jiray deegaanka la ilaaliyo ee ay ku jiraan waxyaabaha dabiiciga ah ee Canada ee gobolka Alberta.
“Waxaan marwalba aad uga fakari jiray habka ay u koraan lafaha xayawaankaas xoogga iyo wayninka badan, si ka duwan lafahayaga, misana ay u noqdaan wax aad u adag sida dhagxaanta oo kale.
Sannad ka hor, waxa ay isaga iyo aabihiis heleen, lafa yaryar oo soo taagan oo ka soo haray xayawaan aanay qiyaasi karin waxa uu yahay, aabihiis ayaana markaas mooday in uu qarka buurta ay ka dhici rabaan.
Yaa isticmaali jiray maradan 50,000 oo sano ka hor jirtay?
Noole labo farood lahaa oo la helay
Marka xagaagan ayuu Nathan go’aansaday inuu baaritaan sameeyo. Lafihii ay meesha ku arkeen ayaana bannaanka uga soo baxayay dhagxaanta buurta.
“Aabe kaalay bal waxan ila arag!” ayuu yiri isaga oo aabihii u yeeraya.
Aabihii ayaa hadalka Nathan ka dareemay inuu wax uun helay.
XIGASHADA SAWIRKA,NATURE CONSERVANCY OF CANADA
“Khalfoofku waxa uu u ekaa lafo dhagxaan ka sameysmay – oo wax kale maba ku khaldaysid,” ayuu yiri aabihii, Dion Hrushkin.
Nathan ayaa ogaa in khalfoofka noocaas oo kale ah lagu ilaaliyay sharciga. Markii ay guriga gaareen, waxay galeen barta internet-ka ee Matxafka Royal Tyrrell, kaas oo ku yaal Alberta looguna talagalay daraasaadka taariikhda nolosha.
Matxafka ayaa u sheegay inay sawirro ka soo qaadaan wixii ay soo heleen iyo astaanta goobta ay ka heleenba – sidaa ayeyna sameeyeen.
Deegaankaas ay khalfoofka ka soo helaan waxaa yaalla haraadiga xayawaanno badan, waana goobta xayawaanka wayn ee dinosaur-ka – ee lagu magacaabo the Albertosaurus – ee sannadkii 1800-meeyadii ka soo helay Joseph Tyrell.
Hasayeeshee goobta ay wiilka iyo aabihii ku lugaynayeen laguma aqoon haraadiga xayawaannada, halkaas oo matxafka uu khubaro u diray si ay u soo baaraan.
Illaa iyo hadda waxay khubaradu soo heleen in u dhaxaysa 30 illaa 50 lafo, kuwaas oo dhammaan uu leeyahay Hadrosaur-ka yar, kaas oo la qiyaasayo in markii uu dhimanayay uu jiray saddex ama afar sanadood.
“Sida inta badan carruurta oo dhan, waxaan aad u jeclaa inaan soo helo khalfoofka xayawaanka wayn ee Tyrannosaurus-ka,” ayuu yiri Nathan.
“Hasayeeshee helitaankayga kaddib, waxaan ogaaday inuu yahay Hadrosaur.”
Xayawaanka dinosaur-ka wuxuu aad muhiim ugu yahay sayniska, waxaa sidaasi sheegay matxafka. Sababtoo ah khalfoofkan wuxuu jiraa qiyaastii 69 milyan oo sanadood, in xog laga helo waqtigaasna waa wax aad dhif iyo naadir u ah.
“Helitaanta khalfoofka Hadrosaur-kan da’da yar waa arrin aad muhiim u ah, sababtoo waxa uu ku soo beegmayaa wakhti aynaan wax badan ka ogayn nooca xayawaanka dinosaurs-ka ama xayawaannada kale ee ku noolaa Alberta.
Nathan iyo Dion khalfoofkan ay soo heleenna waxa uu inaga caawinayaa in aan helno xog badan oo ku saabsan cilmiga sida dinosaurs-ka uu u barbaaro,” ayuu bayaan uu soo saaray ku sheegay François Therrien, oo ka tirsan matxafka khalfoofkaas la dhigay.
Nathan ayaa sheegay inuu ku raaxaysto inuu wax badan ka barto taariikhda lafaha xayawaanka dinosaur-ka, iyo in hannaanka uu maray oo dhan uu ahaa “sida riyo oo kale”.
“Waa wax aad u wayn in la arko, ka dib bilooyin shaqo ah, in ugu dambayntii aan meeshaas wax uun ka soo helnay,” ayuu yiri.